ညီနေမင်း: PC ကို USB flash drive နဲ့ သောခတ်ကြည့်ရအောင်
ဒီကောင်လေးကို မသုံးခင် သုံးနည်းလေးကို ကျွန်တော် ပြောပြပါ့မယ် . မျက်စိထဲကို တန်းမြင်အောင်လို့ပါ . ကျွန်တော်တို့ အိမ်တွေကို လုံခြုံစိတ်ချရအောင် သော့ခတ်သွားခဲ့ရပါတယ် . သော့ကိုသိမ်းထားပြီး ပြန်လာမှ အိမ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေါ့ . သော့ကိုတော့ သိမ်းထားရပါတယ် . အဲအခုလဲ အဲ့လိုပါပဲ . ကျွန်တော်တို့ အမြဲသုံးနေတဲ့ USB flash drive လေးတစ်ခုကို သော့အဖြစ် အစားသုံးလိုက်မယ် . အဲ့ဒီ့တော့ ကွန်ပျူတာကို အဲ့ဒီ့ USB လို့ခေါ်တဲ့ သော့နဲ့ ပိတ်ထားမယ် . ကိုရေခဏသွားသောက်ချင်တယ် ဆိုရင် ထိုးထည့်ထားတဲ့ USB flash drive လေးကို ဆွဲဖြုတ်ပြီးယူသွား ကွန်ပျူတာက သော့ခတ်ပြီးသား အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ် . ရေသောက်ပြီးလို့ ပြန်လာတော့မှ . အခုနက ယူသွားတဲ့ flash drive လေးကို ပြန်ထိုးလိုက် ကွန်ပျူတာက အော်တို ပြန်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ် . တစ်ခြားစတစ်နဲ့တော့ သွားမထိုးနဲ့နော် . ပွင့်မှာမဟုတ်ဘူး . အခုနက သော့အဖြစ်ထိုးထည့်ထားတဲ့ Drive ကိုပဲပြန်ထည့်ရမှာ . အောက်မှာပုံလေးနဲ့ပြထားပါတယ် .
ဘယ်လို Download လုပ်မလဲ ..
(၁) http://usl.sourceforge.net ကိုသွားလိုက်ပါ ..
(၂) USL current release: ရဲ့အောက်က (SourceForge)ရှိတဲ့ လင့်နေရာကို နှိပ်လိုက်ပါ ..
(၃) USL v1.8.0 ဘေးက မြှားလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ .
(၄) ပေါ်လာတဲ့ USBSystemLock-1.8.0-Installer.exe ဆိုတဲ့ လင့်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ program ကို ရပါပြီ Download လုပ်နေပါလိမ့်မယ် .. အောက်မှာပုံနဲ့ပြထားပါတယ် ..
ဘယ်လို install လုပ်ပြီး ဘယ်လိုသုံးမလဲ . (အသေးစိတ်ရေးပြတာ တစ်ချို့ညီအစ်ကိုများ install ကို ကောင်းကောင်း မလုပ်တတ်ဘဲ ခဏခဏမေးမေးနေကြတာတွေ့လို့ အသေးစိတ်ရေးပေးလိုက်တာပါ . သိပြီးသူများ နှာခေါင်းမရှုံ့ကြပါနဲ့)
(၁) Download လုပ်ထားပြီးသားဖိုင်ကို Double click နှိပ်လိုက်ပါ .
(၂) Next ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..
(၃) I Agree ကို click နှိပ်လိုက်ပါ။
(၄) Next ကို နှိပ်ပါ .
(၅) Install ကို ထပ်နှိပ်ပါ .
(၆) နောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ box က Finished ကို နှိပ်လိုက်ပါ .
ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ .
(၁) အခုနက install လုပ်ထားပြီးတာနဲ့ Key Disk Creator ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .
(၂) ကိုသော့အဖြစ်အသုံးပြုမယ့် USB flash drive ကို USB port တစ်ခုခုတွင် ထိုးထည့်လိုက်ပါ။ ပုံမှာပြထားသလို ကို့မှာ port ရှိသလောက်ပေါ်ပါလိမ့်မယ် . ဘာမှမပေါ်ခဲ့ပါက refresh ခလုတ်ကို click နှိပ်လိုက်ပါ။
(၃) ကိုအခုထိုးထည့်လိုက်တဲ့ USB port ကို မှတ်ထားပြီး Next ကို နှိပ်လိုက်ပါ . ကျွန်တော့်မှာက F:\_ ဖြစ်လို့ F:\_ကို select ပေးထားပါတယ် .
(၄) Next ကိုပဲ ထပ်နှိပ်ပါ .
(၅) Finished ကို နှိပ်လိုက်ပါ . ကဲ အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ .
(၆) ကဲ ထိုးထည့်ထားတဲ့ USB flash drive ကို ဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ပါ . နောက်ဆုံးကပုံလိုမျိုး ပေါ်လာပြီး lock ကျသွားပါလိမ့်မယ် . ဆွဲထုတ်ထားတဲ့ usb flash drive ကို ပြန်ထိုးမထည့်မချင်း လုံးဝပြန်ပြီးတော့ destop ကို မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး . စမ်းကြည့်လိုက်ပါ ..
Posted by ညီနေမင်း at 5:40 AM
phyo September 12, 2009 at 10:25 AM
I can run at windows vista service part 1
အစ်ကို ဒါဆို အဲ့ USP ပျောက်သွားတယ်ပဲထားပါတော့ ဒါဆို ပြန်ဖွင့်လိုမရတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုလား ဒါမှမဟုတ်အစကနေပြန်ဖွင့်ရတာလား
yk October 6, 2009 at 7:59 AM
အင်းဟုတ်တယ် အဲဒါလေးလည်း ပြောပါဦး ဘယ်လို ပြန်ဖျက်ရမလဲဆိုတာ အသစ်နောက်တစ်ချောင်းကို အဲလို ပြန်လုပ်ရင်ရော ရမလား အဲဒါဆို နှစ်ချောင်းများဖြစ်နေမလား နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါနော် ကျွန်တော်က တစ်ကယ်မသိလို့ပါ အစ်ကို အားရင် ကျွန်တော့် mail ထဲကို ပို့ ပေးလို့ ရမလား ကျွန်တော့် account က yekokohtet69@gmail.com ပါ။ ကျွန်တော်က အစ်ကို့ ဖြေရှင်းချက်ကို ဘယ်မှာသွားဖတ်ရမလဲ မသိလို့ပါနော်။
ကိုလူချော October 30, 2009 at 11:02 PM
အကို ညီ ရေ.. ကျွန်တော့ကိုလည်း သေရှာရှင်း ပြပေးပါဦးနော် cristianozarni6.5@gmail.com
Choco November 10, 2009 at 4:32 AM
အကြာကြီးထိုးထားတော့ (ယူစ်ဘီ )အတွက် တခုခု သက်တမ်း ဒါမှ မဟုတ် ပျက်စိးတက်ပါသလား
Choco November 10, 2009 at 4:34 AM
ယူစ်ဘီ အကြာကြီးထိုးထားတော့ အပျက်မလွယ်ဘူးလားဗျ သိပါရစေ